Oromoo fi Oromiyaa Bilisomsuu malee furmati birra hin jiru. Kutaa 2ffaa
Malaqi, humni, dandeet fi lubuun Bilisummaa Oromoof hin olee hin barakatiin jeena.
Fillaannoo soba Wayyanen Geggesuu Oromoon mormuu qaba
Filanno Ethiopia yoom iyuu demokratawa waan hintaneef irratti hirmachuun siirna garbonfata dhugomsuun ragga ba’uuf qoofa. Fillaannoo bu’aa tokko ilee hin qabneef mallaqa, yeroo lubu Oromoo wareeguun barbaachisa nati hin fakatu. European Parliamentiin filaannon Ethiopia jijjirama kan hin finne, haqa qabessa waan hin tane irrati mallaqa Milliona 80 hin basuu jeechun isaa filannoon kun filannoo soba ta’uu isaaf ragga gudadha. Mootumman kun jijjirama fi demokrasiti kan amman utuu hin tane Heera fi Seera of isaatin basee cabsun Uummataa Oromoo irratti yakka kana gadii waan raawwateef uummati Oromoo Filannoo soba kana balalefacha qaba:-
Uumatoota Oola Oromoo jiratan hidhachiisuun lafa Oromoo akka saman goodhe lamii Oromoo ficisisaa jira, Hararge, Borana, Gujji, Wallaga guutuma keessatti lola wali irraa hin cinee geggesa jira.
Magalloota Nannoo Finfinne 32 fi lafa karemetra 1, 100, 000 seera feederala cabsuun humnan fuudhata jira. Kanan dura Dirdawa fi Nannoo Harari Undanee humnan fuudhachun isaa ni yadatama;
Wagga waggan baratoota Oromoo University jiran ajeesuu , hidhuu fi barumsaa irra ari’uun kan baratamee ta’ee utuu jiru, bara 2014 ammoo Ambo, Naqamte, Jimma, Gimbi, Haromaya, Madawalabu, Matu Adama fi Dirdawa University keessatti dhigaa ijoole Oromoo heedun harka dhiqatee jira;
Bartooni heedun hidhaman jiru, baratoon fi barsisoon heedun hojii fi barumsa irra ari’aman jiru. Amalee ari’ama jiru.
Artistoon fi Gazeexesitoon Oromoo baa’inan barii isaan hojii irraa itii ari’ataman bara dabarsine 2014 kana keessa;
Mootumman kun kan amanamuu miti. OPDO duran Meesha Tigroon ittin Uummataa Oromoo ajjeesan fi Sagalee gudiftuu isaan ittin Oromooti dubatan malee wara akka nama yaade uummataa isaanfi dhukubsatan miti. Dhaabilee Oromoo wari Wayyane humnan buqisuu barbadans ta’ee warii fillannon jijjiruu barbadan utuu wal hin qoqodin tokkuman waldukaa hojeechuu qabu. Dhugadhuman erga mirga Oromoo kabachisuuf falmatu biyya keessati dhaabbilen Oromoo fronti tokkon wayyane falmachuu qabu. Warii humnan wayyane buqisuuf deemans tokkumaa cimma Uummachun humna cima ta’aan wayyane lolani buqisuu qabu, malee wal facasan humna xixiqoo ta’aan wal lola wayyane loluun waan fakatuu miti.
Warii biyya galuu barbadan ilee biyya galuun dhabiilee Oromoo fi namoota mirga Oromoo kabachisuuf falmataa hunda waliin wal ta’uun tokkuman hojeechuu qabu. Uni Dhaabilee Oromoo biyya galeen qabsa’aa jeedhu hunda ni deggera, garuu ammoo akka itti gala haalaa mijjeefachuu qabu. Namni kara adeemuu tokko waan fudhatee adeemuu maluu hunda dura itti yaadee itti qoopha’ee adeemuu qaba. Innis Mallaqa fudhatee adeemuu qabu, waan ittin nageenya isaa egsifatuu qabachuu qaba, bakka qubatuu, enyuutuu akka isaa simatuu, qunamtii fi teessoo namoota isaa gargaruu danda’aan, bakka ka’ee irra namoota isaa hordoofan, yoo rakkatee humna sadafaa kan ittin iyyachuu danda’uu kkf qabachuu qaba. ODF biyya galuu isaa hin morminu garuu waan imala isaaf isaa barbachisuu guutate moo akkuma Lichoo Bukura sun goochuuf deemadha? Ethiopia seenun Dr. Dima Naga’o hunda nama kanaaf rifachiseef. ODF haalaa kana mijjeefatera tanan yoo biyya galee uummata Oromoo fi dhaabbilee Oromoo ni fayadaa malee balaa hin qabu, utuu deggersa duda dubee tokko ilee hin qabatiin wayyane amanani galuu yoo ta’ee garuu balaan isaa gudadha.
Dr. Dima Naga’o Filanno Biyoolessatti galma’uuf biyya akka galee median Habasha afarsun media Oromoo ilee hanga tokko dogoggorsun Oromoo wal dura dhabu yaalni turan garuu, Dr. Diman Awalcha Adde Tshayi Tolessa irratti argamuuf galee malee filloontti galma’uuf akka hin tane ifa ba’ee jira. Habashoon media isaanin waan dubatan amanani dubachuun hafee macaaf qulqulluu isaan bareesan iyuu soba waan ta’eef dubsuu fi wayee isaa dubachun of salphisudha. Habashoon Amahara ODF biyya galuu waan sodatanf qabu, kun ammoo Oromoof bu’aa guda qaba. Sababin isaa yeroo amma kana isaan gurma’aan hidhatan loluun wayyanee buqisuuf yeroo deeman kanati, ODF biyya keessa galee uummataa Oromoo tokko goodhe humna cimma ijaruu yoo danda’ee Oromuma Amahari balleesuuf deemu du’aa basaa. Akkaa amma jiru kanatti erga diina Finfinnee ga’ee booda yoo biyya alatti kanee fignne uummataa kenya badii irra olchuu nu dhiba, yoo keessa jirane ammoo saboontota Oromoo gurmessun diina dura dhaabachuun hanga humni alaa ga’uuti lamii of bararu ni danda’ama. Kanafuu dhugadhuman yoo dhugaa Oromoof itti yaadan, biyyi ala isaan deggeruu biyya sadafa irra garggarsa argatan yoo biyaa galan Diaspora fi uummani Oromoo ODF deggeruu qaba. ODF haqaa qabesuman isaa kan mirkana’uu biyya galee dhaabbilee Oromoo hunda jalalaa fi kabajan yoo waliin demuu danda’ee qoofa, keesuumatti sochii Qeeroon Oromoo goodhu dura dhabachuu hin qabu. Kanaaf ammoo utuu biyya hin galin Dhaabbilee Oromoo hunda kabajaan marisisee deemuu qaba.
Waari wayyanen humnan buqisuu qabna jeenu hundi ammoo addaa tokkon WBO fi Qeeroo jabeesuun dirqama. Habashoon bakka adda addatti gurma’uun waraana cimma ijaraacha yeroo jiran kanatti humna ABO kan ta’aan WBO fi Qeeroo akka jabatan goochun uummataa Oromoo lafa kana irratti sanyii isaa hambsifu furmata isaa guda ta’aa. TPLF warana ammaya fi hidhanoo gutuu qabuu cimma Afrika keessatti beekamee qaba. Miliishoon nannoo Somaliya ilee Oromoon Abbaa dhabuu isaa baran Oromootti akka itti roorirsa jira ni argina, Tigray TDEM, Ginbot 7, Arbanyoochi, Amahara Democrati Movement, kkf waraana ijaratan biyya seena jiru, biyya keessa ilee harka lafa jalan lola magaala keessa goochuuf qoophi irra jiru. Humna Kana dura dhabachuuf kan jiru ABO qoofa. Kanaafuu Oromoon tokkicha isaa ABO jirachisuu qoofa utuu hin tanee waan barbaachisuu hunda kenuufin hiidhachisuu, itti hirmachuu, media hundan garggaruun dirqama. Malaqi, humni, dandeet fi lubuun Bilisummaa Oromoof hin olee hin barakatii jeena. ABOn cimee yamuu humna ta’uu ODF, OPC fi OPDO ilee abdi guda ta’aa kabaja akka argatanfi akka sodataman goodha. Habashoon haraa Oromooti kan roororsa jiran laafachuu ABO oduu afarfamuu dhaga’aantti. ABO hin laafan adeemsaa isaa jijjiree malee. Habashootatu laafoodha waraa Asmara ta’aani bookkisan, ABOn Oromiyya fi Finfinnee keessa jira.
Biyaa Sabi bicuun uummata heedu dhunfatee bituu keessatti, biyya dhugan hin jire irratti, biyaa inni ajjeese siiti dhadatuu, inni ajjeefame sodatee caalisuu, biyya mariin ilaa fi ilameen hin jire, qaween biyya uummataa bulchuu keessatti wa’ee demokrasii fi filaanno yaadun of gowomsudha. Fillnnoo Soba geggefamuu kana Uummanii Oromoo kara heedu fashaleesuu danda’aa. Inni gudaa dura galma’ee Kardii Harkatii qabachuu dha. Ergasii booda Gaafa fillannoo Kardi fudhatee qabatee manati hafudhan mormii isaa mulisudha. Yoo haalii mijjatee nama wayyanen dorgamuu argatee ammoo dhaabbilee mormitoota filachuun dida isaa ibsuu danda’aa. Mootumman kun Bilisumman filachuu yoo isaan dhorkee sagalee isaa kabachisuuf diiree ba’ee falmachuun mootummaa kana angoo irra busuu qaba. Namni Ethiopia keessa jiru hundi humni alaa dhufuu akka bilisa isaan basan eguun kun siiri miti uummani kun rakkoo mirga dhabuu isaa fi jirenya isaatti hadha’ee kana jalla ba’uuf mootumma kana dura dhabatee falmachuu qaba. Uummani keenya Dhaabbilee siyyasaa Oromoo waliin ta’uun kara isaan mijjatee hunda mootummaa abbaa Iiree waggoota 23 isaa sama jiru kana of irra buqisuu qaba. Uummani Shri -Lanka wagga meeqa booda fillnnoon jijjire jira. Mootumman Ethiopia Fillnnoti jijjiramu waan hin barbaneef uummatii mirga isaa kabachisuuf fillaannno sun humnatti jijjire dirree ba’ee mirga isaaf falmachuun mootummiicha buqisuu qaba malee garbuma wagaa 23 irratti wagga 5 dabaluuf mirkaneesuuf hin qabu.